Mipetraha saha miafina any Wufoo | Martech Zone
Mipetraha saha miafina any Wufoo
Zoma, Martsa 25, 2011 Alatsinainy 4 Febroary 2013 Douglas Karr
Fantatrareo ry olona fa tsy mitanila amin'ny namako ahoformstack as a mpanamboatra endrika an-tserasera, fa amin'ny maha masoivohona antsika dia tsy afaka miasa miaraka amin'ireo rindranasa tiantsika foana isika. Androany, nametraka paikadin'ny pejy fitobiana ho an'ny orinasa iray efa manana izahay Wufoo tafiditra tanteraka amin'ny fizotrany fitantanana.
Ny iray amin'ireo zavatra ataonay antoka foana dia ny fahafantarantsika ny fomba ahazoana loharano tsirairay mba hahafahantsika mampihatra ny teti-bola mifanaraka amin'izany amin'ny fampahalalana tsirairay ary mampitombo ny fitarihana ary mitazona ny vidiny isaky ny mitarika. Mampiasa mpanamboatra endrika an-tserasera toa an'i Wufoo, mety hieritreritra ianao fa tsy azo atao ny manangana a sehatra miafina ary omena mialoha an'io saha io… Tena tsotra izany.
Manampia saha vaovao ary apetaho amin'ny miafina ny teny lakile CSS. Izany dia hiantoka fa tsy aseho mihitsy ilay saha amin'ny endrika na inona na inona fizarana azy.
Ity misy santionany miaraka amin'ny sanda default napetraka eo an-tsaha:
Azonao atao ihany koa ny mametraka ny sanda an-tsaha amin'ny fampiasana querystring URL, koa, hanomanana mialoha ny sandany! Toa izao:
Fitomboana ara-toekarena any Indiana
Manoratra ho an'ny olona tsy mamaky